के तपाईको ‘ब्ल’ड प्रे’सर लो’ छ ? त्यसो हो भने खानुहोस् यी १२ खानेकुरा ! – Jagaran Nepal
के तपाईको ‘ब्ल’ड प्रे’सर लो’ छ ? त्यसो हो भने खानुहोस् यी १२ खानेकुरा !
काठमाडौं । अस्तव्यस्त जीवनशैली तथा खानपानमा ध्यान नदिँदा मानिसहरु विभिन्न रो’गबाट ग्र’सित छन् । ब्लड प्रेसर लो पनि स्वास्थ्यको अनगिन्ति स’मस्यामध्ये एक हो ।
ब्ल’ड प्रे’सर लो बि’रामीहरुले आफ्नो खानेकुरामा विशेष ध्यान दिन अत्यावश्यक छ । खानपानमार्फत नै यसलाई सामान्य बनाउन सकिन्छ । सामन्य र’क्तचाप १२०/८० हुनुपर्छ ।
तर, यदि तपाईको ब्ल’ड प्रे’सर ९०/६० वा त्यो भन्दा कम छ भने,लो ब्ल’ड प्रे’सर भएर्को मानिन्छ ।सामान्तयाः यदि कसैको लो ब्ल’ड प्रे’सर छ भने त्यस्ता व्यक्तिले इ’न्सुलिन बढाउनका लागि त्यस्ता व्यक्तिहरुले गु’लियो खानेकुराहरु खाने गर्दछन् ।
लो ब्ल’ड प्रे’सरका बि’रामीले कस्तो प्रकारको खानेकुरा खानुपर्छ भन्ने विषयमा केहि जानकारी तल दिइएको छ ।१. पात भएको सा’गसब्जीः पात भएको सा’गसब्जीमा आ’इरन हुने गर्दछ जुन मानव शरिरको लागि अत्यावश्यक खनिज पदार्थ हो । ब्ल’ड प्रे’सरलाई कम गरेर त्यसलाई सामान्य बनाउनका लागि यो निकै महत्वपूर्ण हुने गर्दछ ।
सागसब्जीमा प्रोटिन र भिटामिन हुने गर्दछ । ब्ल’डप्रेसरलाई सामान्य बनाइराख्नका लागि प्रत्येक दिन सागसब्जी खाने गर्नुहोस् ।२. डा’र्क च’क्लेटः डा’र्क च’क्लेटले मु’टुको रो’गी र कम ब्ल’ड प्रे’सर भएका बि’रामीहरुका लागि राम्रो मानिन्छ ।
३. बदामः ब’दामले तपाईंको उर्जा र प्र’तिरोध क्ष’मतालाई बृद्धि गर्ने गर्दछ । यसका साथै यसले र’क्तचापलाई नि’यमित गर्ने गर्दछ त्यसकारण यसलाई दैनिक आहारमा समावेश गर्नुहोस् ।४. बोसोरहित मासुः यस्तो मासुको से’वन गर्नुहोस् जसमा बोसोको मात्रा कम हुन्छ । जो व्यक्तिको कम र’क्तचापको स’मस्या छ उनीहरुका लागि टर्की, चिकन र माछाजस्ता पदार्थको से’वन गर्न उचित हुन्छ । यो कम र’क्तचापका लागि सर्वोत्तम आहार हो ।५. रसिलो पो’षिलो झोल पदार्थ : टुसा उ’म्रेको गेडागुडी र झो’लिलो पदार्थ खाँदा शरिरमा उर्जा र राम्ररी र’क्तसञ्चार हुन्छ ।
प्रेसर लो भएको बेला टुसा उम्रेको गेडागुडीको कारण शरीरमा छिटै श’क्ति प्राप्त हुन्छ ।६. फलफूलः यस्तो फलफूलको सेवन गर्नुहोस् जसमा प्रोटिनको मात्रा बढि हुन्छ । यो यस्तो फल हो जसले र’क्तचापका बि’रामीका लागि निकै राम्रो हुने गर्दछ ।७. कालो खाद्य पदार्थः कालो अंगुर, कालो छोगडा आदि खाद्य पदार्थमा आइरनको मात्रा अत्यधिक हुने गर्दछ । यी सबै पदार्थ कम र’क्तचापलाई सामान्य बनाउनका लागि निकै उपयोगी हुने गर्दछ । यसलाई आहारमा समावेश गर्दा र’क्तचापका साथै मुटुलाई पनि स्वस्थ राख्ने गर्दछ ।
८. अमिलो खाद्य पदार्थः गर्मीमा अमिलो खाद्य पदार्थ जस्तो सुन्तला आदि स्वास्थ्यका लागि निकै राम्रो हुने गर्दछ किनभने यसमा पानी र ए’सिड दुबै पाइने हुनाले कम रक्तचाप भएका बि’रामीहरुको शरिरमा उर्जा निर्माण गर्न सहयोग गर्ने गर्दछ ।९. गहुँ: मैदाको तुलनामा गहुँ निकै राम्रो मानिन्छ । कम र’क्तचापलाई सामान्य बनाउनका लागि यसको प्रयोग गर्नु लाभदायक हुने गर्दछ भने स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि उत्कृष्ट साबित हुन्छ ।१०. लसुनः लसुनलाई आफ्नो आहारमा समावेश गर्ने मानिसहरुको र’क्तचाप सामान्य हुने गर्दछ ।
११. कफी : ब्ल’ड प्रेसर कम भएमा स्ट्रोङ कफी, हट चकलेट, कोकाकोला अथवा क्या’फिनयुक्त खाद्य पदार्थ खानाले प्रे’सर सन्तुलनमा आउँछ । यदि सधैँ प्रे’सर लो भइरहन्छ भने हरेक बिहान एक कप कफी खाने गर्नुपर्छ । तर, कफीसँगै केही खानेकुरा खान भुल्नु हुँदैन ।१२. नुनपानी खाने : नुनमा सो’डियम पाइन्छ, जसले ब्ल’ड प्रे’सर बढाउन मद्दत गर्छ । प्रे’सर लो भएमा एक ग्लास पानीमा डेढ चम्चा नुन हा’लेर पिउनुपर्छ ।एजेन्सीको सहयोगमा